जसले रोक्न खोज्दैछन् ‘एमसीसी’ – Kanak Mani Dixit
नागरिक दैनिकबाट (९ असार, २०७७) बाट
संयुक्त राज्य अमेरिकाले विपन्न मुलुकमा गरिबी उन्मूलन गर्न सन् २००४ मा एउटा नयाँ अभियान शुरु गर्‍यो, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अर्थात् एमसिसी। भदौ, २०६८ (अगस्ट २०११) मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि आजसम्म सरकार र विपक्षमा रहेका लगभग सबैको एमसिसीको नेपालमा सहभागिताको खाका तर्जुमा भयो।
नेपाली पक्षले नेपाललाई यसबखत सबैभन्दा चाहिने बिजुली उत्पादन मुलुकभरि पुर्‍याउने विद्युत् प्रसारण सञ्जाल तयार गर्ने निधो गर्‍यो। अन्य परियोजना जस्तो ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने हेतुले सम्झौतामा विभिन्न प्रावधान राखिए। यसका साथै सुरुआतको पाँच वर्षभित्र काम नसकिए बाँकी रहेको पैसा फिर्ता जाने सर्त पनि राखियो।
सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौता भयो। काम सरकारले सीधै सुरु गरे पनि हुन्थ्यो। तर ,कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार यसलाई संसदीय अनुमति चाहिने भयो। यति काम मात्र बाँकी थियो। सरकारले यो विधेयक संसद्मा सभामुुख कृष्णबहादुर महरामार्फत पेस गर्‍यो। आज पनि यो सभामुख अग्नि सापकोटाले अगाडि नबढाएका कारण ‘स्ट्यान्डस्टिल’मा छ।
सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति–संघर्षले राज्यलाई चाहिने एमसिसी परियोजना धरापमा पारेको छ। ‘विन–विन’बाट नेपाललाई ‘जिरो–सम’मा पुर्‍याइँदै छ।
यति सबै भनिसक्दा, मानौँ एमसिसी वास्तवमै अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाल बिगार्न ल्याएको डरलाग्दो योजना हो— जतिवेला नेपाललाई यस्तो खतरा महसुस हुन्छ, योजना रद्द गर्ने प्रावधान छँदै छ। के अमेरिकी सेनाले नेपालमा ‘मिसाइल बेस’ बनाउनै खोजे नेपाली नागरिक चुप बस्लान्? एमसिसी सम्झौता अनुसार मात्र एक महिनाको सूचना दिएर नेपाल या संयुक्त राज्य अमेरिका यो सम्झौताबाट बाहिरिन सक्छ।
एक महिना अवधिभित्र सम्झौता रद्द गर्ने सुविधासहित अन्य कुनै पनि प्रावधान नेपालका लागि घातक नहुन र नेपालको समग्र विकासमा विद्युत् प्रणालीको ‘र्‍यासनलाइजेसन्’का कारण अपरिहार्य यो सम्झौताको खिलाफमा लोकरिझ्याइँमा आधारित सशक्त शक्ति प्रदर्शन किन र कसरी हुँदै छ? किन जनताको हित बिर्सेर पुरातन षड्यन्त्रकारी सोचको तारो बनाइँदै छ एमसिसी? कसरी सानातिना कुरालाई ठूला–ठूला षड्यन्त्रको संकेत भनी प्रस्तुत गरिँदै छ?
सरकारको ढंग नपुगेको र प्रम केपी ओलीको अहंकारी शैलीका कारण एमसिसी धरापमा परेको भन्ने कुरामा राम्रै दम छ। तर, बृहत् नेपाली अर्थतन्त्र र समाजको हितलाई बिर्सेर ओली र उनको सरकारलाई कमजोर बनाउन अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने गरी यो प्रपञ्च किन?
तर यो परियोजना यस्तो छ– रद्द भएन भने यसले अर्थतन्त्र उकास्न योगदान दिन थाल्छ, सबैले यसको श्रेय बटुल्ने छन्। अर्थात् आउँदो स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनमा एमसिसी कसैको निजी ‘फुटबल’ बन्ने छैन। ‘कम्प्याक्ट’को विरोधमा सिद्धान्त र दर्शन छैन, मात्र एउटा पार्टीभित्रको दाउपेचले पूरै मुलुकलाई रिँगाइदिएको छ। एमसिसी नेपाली समाजका लागि ‘विन–विन’ हो, तर ‘जिरो–सम’ जस्तो गरी यसको विरुद्धमा बहस जसरी उर्लियो, गाउँ–गाउँमा नागरिकलाई यसले रनभुल्लमा पार्‍यो। अब धेरैलाई ठूलो देश–नाशक षड्यन्त्रको विश्वास दिलाउँदै गएको छ।
‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (रणनीति) सन् २०१७ मा मात्र अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री माइक पम्पेओले घोषणा गरेको हो भने नेपालमा अमेरिकाले एमसिसी सम्झौतामा काम थालेको सन् २०११ मा हो। त्यसैले कसैले पछि आएर ‘यो आइपिएस अन्तर्गत हो’ भन्दैमा हामी किन पत्याउने? बरु प्रतिवाद गर्ने।
नेपालको तर्फबाट झन्डै एक दशक अमेरिकी पक्षसँग वार्ता गर्ने अर्थ मन्त्रालयका उच्चतम पदाधिकारीले पनि देशको हितमा सोचे होलान्। त्यस्तै, शीर्षस्थ र मध्य–तहका सबै दलका नेताहरू, जसको बेलामा योजना तर्जुमा भयो, सम्झौतामा सहीछाप भयो, तिनले पनि पक्कै सोचे होलान्। पूरै नेपालको कर्मचारी तप्का र राजनीतिक तप्कामाथि कलंकको दाग लगाउन किन हामी त्यति छिटो तत्पर हुने, कुन आत्महीनताबोधले डोर्‍याएको मानसिकता हो यो?!
तर, कांग्रेसभन्दा बढी स्थितिलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन प्रम केपी ओली जिम्मेवार छन्। कतिपय महत्वपूर्ण काम उनको तयारीको कमजोरीका कारण अलपत्र परेका छन् भने धेरै विषयमा उनी र उनको सरकारले ध्यान नदिँदा कुरा बिग्रेको छ। उदाहरण सर्वत्र छन्, संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गरौँ– प्रधानमन्त्रीले जनता र द्वन्द्वपीडिततर्फ जिम्मेवारीबोध नगरेर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले जे गरे गरून् भनी छोड्दा आजको ‘डेडलक’ छ। एमसिसीको हकमा आफ्नो पार्टी तथा बृहत् समाजलाई कुरा नबिग्रँदै सम्झाउने काम प्रम ओली र उनको टिमबाट भएन।
विश्लेषकहरू बोल्न तर्सनुको कारण हो– राम्रै ‘ट्रोलिङ’ हुने गर्छ आजकाल। र, यो पंक्तिकारले जस्तै एमसिसीका लागि बोल्ने हो भने प्रश्न उठ्छ— ‘किन यति बोलिरहेछ यो मनुवा? अमेरिकी परियोजनाको प्रतिरक्षा गर्न राम्रै अमेरिकी डलर पचाएको हुनुपर्छ।’
विश्लेषकहरू बोल्न तर्सनुको कारण हो– राम्रै ‘ट्रोलिङ’ हुने गर्छ आजकाल। र, यो पंक्तिकारले जस्तै एमसिसीका लागि बोल्ने हो भने प्रश्न उठ्छ— ‘किन यति बोलिरहेछ यो मनुवा? अमेरिकी परियोजनाको प्रतिरक्षा गर्न राम्रै अमेरिकी डलर पचाएको हुनुपर्छ।’ यस्तो अवश्यम्भावी आरोप किन बेकार निम्त्याउने, बरु एमसिसीलाई यही बर्खाको बाढीले बगाओस्— यस्तो छ मनस्थिति र अनुत्तरदायित्वबोध।
थप, संसद्मा मलिन मात्र आवाज उठाउने नेपाली कांग्रेस तथा सचिवालयको इसारामा चल्ने एमाले–माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरू माथिल्लो र तल्लो सदनमा आफ्नो मनको कुरै राख्न नसक्ने देखियो। यस्तो शून्यताले त लोकतन्त्र होइन डरकामारे अधिनायकतन्त्रको आभास दिन थालेको छ, जनताको पक्षमा बोल्न डराउने प्रान्त र संघमा गरी सयौंमा सयौं सांसद त स्वतन्त्र विचारधारी नभई पार्टी नेतृत्वका रैती रहेछन्, बुझ्नुपर्‍यो।
नेपालले यो अवस्थामा आएर एमसिसी सम्झौता रद्द गर्दा पूरै पश्चिमा मुलुक तथा यी मुलुकको कुरा लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकासका संघ–संस्थालाई असर पार्नेछ– विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभिन्न आइएनजिओहरू। यसरी नेपाललाई समुद्रपारका मुलुकसँग एक्ल्याउनु कति जायज?
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय छवि यसरी बिग्रन दिनुहुन्न। नेपालले आफ्ना विकल्प खुला राख्नुको साटो पश्चिमा शक्तिलाई दूरीमा राखेर भारत–चीनबीचको चक्रव्यूहमा रुमलिन किन आज काठमाडौंमा गृहकार्य भइरहेछ? नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा आफ्नो सहभागिता बढाउनुको साटो सीमित नेताको निजी राजनीतिक स्वार्थले किन उल्टो खुम्च्याउँदैछ?
टेलिभिजन, अखबार, अनलाइनमा एमसिसीबारे ठुल्ठूला बहस चलाइँदा, विचार पेस हुँदा यस विवादका मूल ‘आयोजक’, जसले सुषुप्त ढंगले गोटी चलाइरहेछन्, उनको खेलबारे चर्चा हुँदैन। एमसिसीको खारेजीले नेपालको राजनीति खलबल्याउँदै फेरि पनि अस्थिरतातर्फ समाजलाई डोर्‍याउँछ, यसको पनि हेक्का राखौँ।
NSC 78| India-Nepal Cartographic Tussle
Has India’s Relation With Nepal Turned Sour? Himal Southasian Editor, Kanak Mani Dixit Speaks